Iimifanekiso ezili-10 eziphambili ze-Snowboard ze-All Time
Iimpawu ze-Snowboard ziyingxenye ebalulekileyo yeklasi ye-snowboard, kwaye ngeminyaka siye sabona ukuhamba okungaqhelekanga kunye nomhlaba obanjwe kwifilimu. Nazi iifilimu ezili-10 ngamnye umkhwele kufuneka abone, kungakhathaliseki ubudala, indawo, okanye isitayela sokugibela.
1. IHaakonsen Faktor (1999)
I-Terje Haakonsen yaziwa njengomnye wabagijimi abanokwenza ubuchule bexesha lonke, kwaye iHaakonsen Faktor ibonisa indlela yakhe yokugibela ekhethekileyo.
I-Terje ithatha intaba enkulu, ihamba enkulu, kwaye yenza konke ngesitayela ukuya kwinqanaba elilandelayo kule film yokuqala ye-snowboard.
Emuva kuMnyama (2003)
Ukubuyela eMnyama kwakungenye yevidiyo ezinqabileyo ze-snowboard zika-2003, kwaye ngokuqinisekileyo zazihlala zikulindeleke kubagibeli. Le Fountainpin Productions flick ibonisa abahamba phambili abahamba phambili bexesha, kuquka uGigi Ruf, uChris Coulter, Todd Richards, uScotty Wittlake, uJeff Anderson noJF Pelchat. Umrhumo odlulayo kuJeff Anderson emva kokufa kwakhe okubuhlungu ekuqaleni kwonyaka kwenza le yeyona mavidiyo amaninzi ephuphuphukayo.
3. Iprojekthi yoLuntu (2005)
Iprojekthi yoLuntu ngokukhawuleza yaba yiyo yonke i-video yokukhwela xa ikhutshwe ngowama-2005. Iprojekthi yoLuntu ibonisa abagibeli abanomdla kunye nabasemgangathweni be-2000s yokuqala, njengeTerje Haakonsen, uJJ Thomas noTravis Rice. Eli phephancwadi lathabatha i-snowboarders kwiindawo zabo zokulala e-US naseCanada kwezinye zezona ndawo zifunyenwe kwi-snowboard kwilizwe, kuquka iNew Zealand, i-Alaska, iJapan kunye nokunye.
4. Hamba kwiiNtaba (1994)
Iimvumi ezingcono kakhulu ze-snowboard azihlala zifaka iimpawu zepaki ezitsha, iimitha, kunye nemibhobho. Ukugijima kwiiNtaba ngenye yezo ziqhelo ze-snowboard amavidiyo ukuba wonke umgibeli kufuneka abone ebomini babo. Umculo yiPantera, i-White Zombie, uSihlalo wesiliva kunye nezinye iirakhi ezinzima kunye nezindandatho zensimbi ezinzima zidlala ngaphaya kwemigca yabagibeli njengoPeter Line, iTerje Haakonsen, u-Aaron Vincent kunye no-Jim Rippey, okwenza okokuqala i-snowboard enye yezona zinto zibonakalisa zonke izinto.
5. Ubomi bokwenyaniso (2001)
Ubomi bokwenene buhluke kwezinye iifilimu ze-snowboard zangaphambili kuma-2000. Eli phephancwadi ekugqibeleni lanikela abagibeli bemihla ngemihla ukuba bajonge ebomini bezinto ezihamba phambili nangemifanekiso yecala lokuhamba kunye nokuphila entabeni. Le vidiyo iphinde ibonise iinqununu zesigxina se-JP Walker, uPeter Line esityhila ukubuyela emva kwengubo yesikhumba, kunye nokugibela okungaphenduliyo kuwo onke amalungu athandekayo kwiqela leForam elingalibalekiyo.
6. Emvab (2002)
Njengoko kukhuphiswano, inkxaso, kunye namaqela akhula kwiminyaka yokuqala ye-2000, abantu baqala ukuthatha i-snowboarding ngakumbi-ngamanye amaxesha kuncinci kakhulu . Abagibeli bafuna ifilimu efana no- Afterbang ukubuyisela umdlalo kumhlaba. Abaxhasi be-Filters nabahleli bakaJess Gibson kunye noPeter Wikberg bahlekisa ngokubaluleka kwelo mdlalo kunye nabadlali abafana neTravis Parker, uLouie Fountain kunye noChris Engelsman kwifilimu ye-snowboard evulekileyo eyenza abagibeli behleka ngoxa bebancipha umda wezemidlalo.
7. Yiyo Yona Yonke (2008)
Yiloo Yonke into eyenza amafilimu e-snowboarding abuyele kumdlalo ophakathi kwezemidlalo ngo-2008. Umgangatho ophezulu wokuvelisa umgangatho, isenzo esingasigxininisi, indawo ekhangelekayo kunye nokuhamba ngokukhawuleza kunye nokuhamba kwepaki nguTravis Rice, uJeremy Jones, uJohn Jackson, uNicolas Muller noTerje Haakonsen, Ndenze le flick yebhola le-snowboard kufuneka ibe nayo kwi-shelf ngalinye.
8. Uzulu (2010)
Ukukhwela kwe-Backcountry akuphelelwa yiphakamiso sayo kwisikrini esikhulu. Ucwaningo lweTeton Gravity kunye noJeremy Jones lubonisa indlela ifilimu efanelwe ngayo ukugibela iintaba ezinkulu kwi-snowboarding yayo ye-2010, Deeper . Ukufakela ikhamera-umsebenzi kunye nokuveliswa kwekhwalithi ephakamileyo kwenza i-mountain backcountry enkulu ekhwele i-snowboarders abangenakufumana ithuba lokukhwela.
9. I-Futureproof (2005)
I-Gigi Ruf ibengomnye wamagama amakhulu kakhulu ekukhwele kwithuba elide nje ngeTerje Haakonsen, kunye nesitayela sakhe kunye neetalente ezikhethekileyo yintoni eyenza iifilimu zimbonise ukuba zingenakwenzeka. Indlela uRuf kunye nabagibeli abahamba nabo (njengoNicolas Muller, JP Solberg, noDavid Carrier Porcheron) basebenzisa ubuninzi bempawu zendalo zemvelo kwi-Absinthe Films ' Futureproof iye yavuselela abagibeli ukuba baqhubeke bekhulile iminyaka elishumi.
10. I-Apocalypse Snow (1983)
I-Apocalypse Snow yayiyifilimu yokuzonwabisa yasebusika yokuqala yokubonisa i-snowboarding, kwaye kufuneka ukhangele nayiphi na i-jackkie ye-snowboard.
Ifilimu ye-1983 ngokuqinisekileyo ayibonakali ngokutsha kunye neendlela ezininzi zokuhamba ngekhephu, kodwa ikhefu lesikolweni esidala , i-backcountry airs, kunye ne-powder shredding inikeza ukubukeka okumangalisayo kwimbali ye-snowboarding.
Indlela Yokuguqula Ngaphambili ne-Backside kwi-Snowboard
Isikhokelo esigqibeleleyo sokujonga i-Snowboard Stance yakho
Iindlela ezili-8 zokuphucula ukulingana kwakho kwi-snowboarding
Ukuhamba ngeGeorboard Gear yakho
Iimpahla ezinkulu ze-Snowboard zika-2014-15
Iimpawu eziphambili ze-snowboarding kwi-Netflix ngoku ngoku
Indlela yokumisela i-Snowboard Bindings ukuhamba kwi-Terrain Park
Indlela yokuhamba nge-Snowboard Fakie (Shintsha)
Yintoni I Gear Ngaba Ndiyifuna Snowboard?
I-Pomona College GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Ixesha leMiqathango yeNtetho yeNtaliyane
Ukuphazamiseka Kwendlela yokuziphatha kunye nezoMoya kwiMfundo ekhethekileyo
Vula kwaye Gcina - Ukudala i-Notepad
Ngowe-1918 iSpeyin Flu Pandemic Pictures
Yintoni uMfundisi weBafundi?
Abalingiswa kunye nezihloko ezivela kuTracy Letts '"Agasti: County of Osage"
Emily Dickinson Imibongo
Usuku olude kakhulu lonyaka
Ukuguqula iMimoya yeBhari
Izibambiso zesiTenzi zesiTaliyane: i-Tradurre
Imithi yooMongameli kaMongameli
UCharles de Montesquieu Biography